USTEVEN UNIVERSE RECAP: YINTONI INGXAKI YAKHO - STEVEN IPHELA
USteven Universe Recap: Yintoni ingxaki yakho
Ukuqwalaselwa kwakhona: Intloko kaSteven noAmethyst edolophini ukujonga uRuby obalekileyo; kodwa ngelixa uSteven exhalabile ngokulungisa iingxaki zomnye umntu, i-Amethyst ijolise ekuqinisekiseni ukuba uSteven ulungile.
Impendulo yombuzo othi kutheni kungakhange kubekho ziqendu zijolise kwi-Amethyst mva nje, kubonakala ngathi, ngenxa yokuba emhle kakhulu izinto zilungisiwe.
Ngayo yonke i-madcap ekhwaza kule ngqungquthela yeli nqaku, yinto ephantsi ngokumangalisayo, kwaye hayi ngendlela embi. Ukuba inkulumbuso yayizolo ikhawuleze yagudisa izinto ezimbalwa ngokukhawuleza okukhulu, ke lo ngumphefumlo omde ukuqala ukuhlenga-hamba emva kwayo yonke into ethethwa ngabalinganiswa bethu.
Ngelishwa akukho ndlela yokuthetha ngokoqobo malunga nesiqendu sakho seemvakalelo ukuze ungafumani ncinane, kulungile, uthethe; kwaye ngaphandle kwento yokuba lo mboniso wakhe incwadi yemidlalo eqinileyo yokwenza imiboniso emide yencoko ibonakale inomdla, kusekho amaxesha apho esi siqendu sihamba sirhuqa ngenxa yokuba iskripthi sidinga ixesha lokwakha ukuya kwinqanaba-ngakumbi indawo yaselwandle.
Nje ukuba i-Amethyst iphulukane nomonde, nangona kunjalo, ukulinda kuba ngaphezulu kwexabiso, kwaye ekubuyeni kwakhona kunengqondo entle yokwakha ukusebenza kwi-POV yakhe kune-Steven's. Isiqendu sonke sisebenza ngokusekwe kulwazi lwangaphambili lwesimilo sika-Amethyst kunye nokukhula kwakhe-ubuntwana bakhe bokuqala bubonakala ngathi buyindlela yokubuyela kwimeko yakhe yokuqala kunye nokungakwazi ukujongana nemicimbi enzulu; Ngaphandle kokuba isenzo sakhe sijolise ngqo kuSteven kwaye simphazamise kwidrama esesandleni. Ude azame ukulahla indlela yakhe yesiqhelo ye-brusque, xa ngokucacileyo ingasebenzi, ukubuza ngqo kuSteven ukuba uqhuba njani-ukuzama ukunxibelelana naye ngokwemiqathango yakhe.
Nokuba ukwala kwakhe kokuqala ukuthetha ngaye, isicwangciso esiqhelekileyo seziqendu ze-Amethyst ezidlulileyo, kungenxa yokuba akafuni ukubeka umthwalo wakhe ngokweemvakalelo kumntwana wokoqobo osele ehlupheka. Akukho nanye kwezi eyinkqonkqoza ngokuchasene noPearl noGarnet, abavunyelwe ukuba bakhale ngenxa yeziganeko ezichaphazela umhlaba kwaye iiarcs zabo zibuhlungu-kodwa zikwayimfumba yobundlobongela, kwaye uSteven ufuna umntu onokuba ngumntu omkhulu kwaye uqonde ubunzima beGem Stuff. Kwaye kukho ukwamkeleka okuyimfuneko kakhulu kweenjongo ezintle zikaRose ecaleni kweempawu zakhe ezimnyama ezazilahlekile kwangaphambi koko.
Kukubhala ngobukrelekrele, kokubini ulwakhiwo kunye nembono yomlinganiswa, ovuza abaphulaphuli kutyalo-mali lwangaphambili. Njengokuwa ngokwahlukeneyo yinto ebonakalayo ebonakalayo kodwa ayisiyonto eqaqambileyo, kodwa lo mahluko ukhanyisa ngcono i-monologue ka-Amethyst yoloyiso, ukumdubula phezulu njengoko emile iinyawo zakhe zityaliwe nengalo yolulwe- ngokuqinisekileyo incinci, kodwa engoyiki kwaye elungele ukuqhubeka Umhlaba. Ewe inenkcazo yenjongo njengoko besinayo kumboniso okwethutyana, kodwa kule meko ifunyenwe bobabini ngokuzimisela kwendalo kunye nonodoli osecaleni wezifundo ezithile ezingaveli ngokwaneleyo kuyo yonke iminyaka Uthotho lweTV, kwaye kufanelekile ukubakhokelela ekhaya ngokufuthi amaxesha ngamaxesha.
Uxolo ndilungile. Ndinebhongo kakhulu ngaye. Kuqhelekile, akunjalo.
Umxholo wokuqhutywa kweziqendu uqala ukuzibonakalisa: ukuvalwa. UPearl uyaqonda ukuba uRose wayemthanda ngokwenyani kwaye wayemonwabisile, eyinxalenye yokukwazi ukulala ngexesha elidlulileyo. U-Amethyst ngokuzingca uzibhengeza ngekamva kwaye umntu uSteven angathembela kuye, evula umnyango oya kwikamva onokwakhela kule nto yenziwa nguRose ngaphandle kokubona isithunzi sakhe (kunye nengxaki). Oko kusishiya ngeziqendu ezithathu kunye nezinye iiGlass Crystal: Garnet, Peridot, kunye neLapis.
Ukusonga konke oko kuluhlu olunye lweziqendu kuludwe olude kakhulu, ngakumbi iiarc zemvakalelo eziye zahlala phantse isiqingatha seminyaka elishumi somoya wokwenene. Ukuza kuthi ga ngoku sinempumelelo edibeneyo kunye ne-slam dunk enye, eyokugqibela iza ngokuyinxenye kuba ihlukane ngokulula ukusuka kubuninzi bembali kude kube ngoku. Yeyiphi enye elungileyo elungileyo, kuba le yinxalenye yomboniso malunga nokuba ungambeka njani kwaye uvavanye ngokugxeka ilifa. Kwelinye icala, ukubhalwa kuye kwazicwangcisa iinkqubela ezahlukeneyo ngoku ukuza kuthi ga ngoku kwiimfihlo nakwimbali yasemva. Ukuba injongo ngoku kukuhamba usuka kuloo nto, sisuka phi ukusuka apha?
Ndicinga ukuba siza kufumanisa xa isiqendu sangomso sijongana neRuby's Emotional Stuff.
UVrai ngumbhali we-queer kunye neblogger yenkcubeko; balamkele ngokupheleleyo ixesha labo lobomi njengomthandi wenkunkuma. Unokufunda ngakumbi izincoko kwaye ufumane malunga neentsomi zabo Izixhobo zeTinfoil zeFashoni , bamamele kwi-podcasting Isandi somsindo , baxhase umsebenzi wabo nge Patreon okanye PayPal , okanye ubakhumbuze ngobukho be Iifayile .
Ukuzimela Kwakhona Komhla
Amakhehla Amane Amakrele
Ndithetha kuwe meme
spider man ibhokisi yeevesi yebhokisi yeofisi
UChloe dykstra ulixoki
yenza zerg rush ngoku
inamba yobudala bokubuza isigwebo ibhokhwe
Indoda endala ikhwaza ilifu